Killer Shark (2021) | MM Movie Store
“ကိုယျ…မငျးကိုအရမျးခဈြတယျဒီလိုပွောပွီး ကြှနျမကို ကြောခိုငျးသှားခဲ့တဲ့ရှငျ့ကို ကြှနျမမုနျးတယျ…..ပငျလယျကွီးရေ..ရှငျဟာ စိတျပကျြစရာကောငျးလှနျးလှသလို နှဈသကျစရာလညျးကောငျးပါတယျလူကို အံ့ဩစနေိုငျတဲ့ အစှမျးတှရှေိတဲ့ သဘာဝကွီးတဈခုပေါ့…
ဒါပမေဲ့…. ကြှနျမတော့ ရှငျ့ကိုမုနျးပါတယျ”ပရိသတျကွီးအတှကျ ဒီတဈခါတော့ အခြိနျတဈနာရီလောကျ မထတမျးကွညျ့လို့ကောငျးမယျ့ ကားလေးနဲ့ မိတျဆကျပေးပါမယျ ။ ပိုစတာကိုကွညျ့တာနဲ့ သောငျးကနျြးတော့မယျ့ ငါးမနျးမှနျး သိပွီးသားဖွဈမှာပါ ။
ဒါပမေဲ့ ပရိသတျကွီးမသိသေးတာက ဒီကားလေးထဲမှာ သံယောဇဉျတှေ ၊ လူတှရေဲ့စိတျနသေဘောထားတှေ ပွီးတော့ အရမျးမိုကျတဲ့ ကှနျပြူတာအဖကျ တှပေါဝငျနတေယျဆိုတာပါပဲ ။လူငယျလေးတဈစု အားလပျရကျမှာ ပငျလယျဘကျကို အပနျးဖွခေရီးထှကျလာကွပါတယျ ။
ဘာပွသာနာမှမရှိပမေယျ့ အုပျစုထဲက စုံတှဲတဈတှဲရဲ့ အခဈြစမျးမှုတှကွေောငျ့ စီးလာတဲ့ သင်ျဘောက ကြောကျဆောငျနဲ့ တိုကျမိသှားပါတယျ ။ ဇာတျလမျးက အဲ့ကစတာပေါ့နျော ။ပငျလယျပွငျကွီးထဲမှာ ကယျမယျ့သူမရှိတုနျး တဈခုတညျးသော လုပျစရာရှိတာက ကြှနျးငယျလေးတဈခုဆီ လကျပဈကူးသှားဖို့ပါ ။
အဲ့တော့ ဒီသူငယျခငျြးတဈသိုကျ ကြှနျးငယျလေးဆီရောကျအောငျကူးနိုငျပွီး ဘယျနှဈယောကျမြား ဇာတျလမျးအဆုံးမှာ အသကျရှငျကနျြမလဲ ကွညျ့လိုကျရအောငျနျော။
“ကိုယ်…မင်းကိုအရမ်းချစ်တယ်ဒီလိုပြောပြီး ကျွန်မကို ကျောခိုင်းသွားခဲ့တဲ့ရှင့်ကို ကျွန်မမုန်းတယ်…..ပင်လယ်ကြီးရေ..ရှင်ဟာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလွန်းလှသလို နှစ်သက်စရာလည်းကောင်းပါတယ်လူကို အံ့ဩစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းတွေရှိတဲ့ သဘာဝကြီးတစ်ခုပေါ့…
ဒါပေမဲ့…. ကျွန်မတော့ ရှင့်ကိုမုန်းပါတယ်”ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီတစ်ခါတော့ အချိန်တစ်နာရီလောက် မထတမ်းကြည့်လို့ကောင်းမယ့် ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါမယ် ။ ပိုစတာကိုကြည့်တာနဲ့ သောင်းကျန်းတော့မယ့် ငါးမန်းမှန်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ။
ဒါပေမဲ့ ပရိသတ်ကြီးမသိသေးတာက ဒီကားလေးထဲမှာ သံယောဇဉ်တွေ ၊ လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေ ပြီးတော့ အရမ်းမိုက်တဲ့ ကွန်ပျူတာအဖက် တွေပါဝင်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ ။လူငယ်လေးတစ်စု အားလပ်ရက်မှာ ပင်လယ်ဘက်ကို အပန်းဖြေခရီးထွက်လာကြပါတယ် ။
ဘာပြသာနာမှမရှိပေမယ့် အုပ်စုထဲက စုံတွဲတစ်တွဲရဲ့ အချစ်စမ်းမှုတွေကြောင့် စီးလာတဲ့ သင်္ဘောက ကျောက်ဆောင်နဲ့ တိုက်မိသွားပါတယ် ။ ဇာတ်လမ်းက အဲ့ကစတာပေါ့နော် ။ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာ ကယ်မယ့်သူမရှိတုန်း တစ်ခုတည်းသော လုပ်စရာရှိတာက ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုဆီ လက်ပစ်ကူးသွားဖို့ပါ ။
အဲ့တော့ ဒီသူငယ်ချင်းတစ်သိုက် ကျွန်းငယ်လေးဆီရောက်အောင်ကူးနိုင်ပြီး ဘယ်နှစ်ယောက်များ ဇာတ်လမ်းအဆုံးမှာ အသက်ရှင်ကျန်မလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။